'Kumele Umkhuhlane Woqhuqho Uphele Kungakafiki Umnyaka ka2020'
Umama uzama ukwelaphisa umntwana olomkhuhlane woqhuqho.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukusabalaliswa kemfundiso yokuzivikela kusifo soqhuqho ese malaria ngesikhathi kungakatholakali umuthi wokuvikela lumkhuhlane.
Abalungisa umuthi obizwa ngokuthi yi-vaccine bathi sebelengqubela phambili ekuphumeni lawo. Kukhangelelwe ukuthi uzaqalisa ukusetshenziswa okusemthethweni emazweni afana le Ghana, Malawi lamanye amazwe ngomnyaka ozayo.
Isikhuthazo lesi senziwe ngesikhathi amazwe wonke womhlaba ngoLwesibili enanza usuku lwe World Malaria Day.
UDokotela Pasipanodya Nziramasanga, ofundisa izifundo zobudokotela ekolitshini le University of Zimbabwe, uthi uzulu kumele abelomkhuba wokudinga ulwazi olujulileyo mayelana ngesifo soqhuqho.
Osakhulayo ocubungula ngesifo soqhuqho uthi ulwazi olunje lungaphathisa abantu abanengi lezingani zabo kundawana abahleli kizo kulandelwa indlela yokuzivikela ukubamba lumkhuhlane ungakahlaseli eyePreventive Care.
Lesi sifo sihlasela abantu phose abafika kunxenye yesigidi ngomnyaka njalo sihlasela iziqinti ezedlula amatshumi amane eZimbabwe, ikakhulu indawo ezisemingceleni lamazwe afana le Zambia le Mozambique.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuba abantu bazi ukuba noma kungela vaccine okwamanje lesi sifo silemithi njalo sisenelisa ukwelapheka ngakho-ke abantu bakhuthazwa ukusiphangisela ukuyadinga usizo lokwelatshwa nxa sebehlaselwe yiso.
Ngonyaka ka 2015 abantu abangaba yizigidi ezedlula amakhulu amabili - 214 million - bahlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho emhlabeni wonke jikelele, abangaba phose ingxenye yesigidi – 430,000 - babo babulawa yiso inengi labo bengabezwekazi le Africa.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organisation ikhankasela ukwesulwa kwesifo soqhuqho kungakafiki umnyaka ka2020.